Kuxhasiwe | June 2021
Ikusasa Leqiniso Langempela Enqubeni Yezemfundo Yesimanje
Namuhla umhlaba ubhekana nezinguquko eziningi ezibangelwe yi-VR, futhi lezi zinguquko zinamathuba onke okwenza izinguquko ezibalulekile ohlelweni lwesikole lwanamuhla.
Ukubuyiselwa Kwemininingwane kwe-EaseUS, iWizard Best Recovery Data Wizard 2020!
I-EaseUS Data Recovery Wizard mahhala ikusiza ukuthi uphinde uthole amavidiyo alahlekile, amadokhumenti, izithombe nokuningi kusuka kudatha esusiwe, ukwahlukanisa okulahlekile noma okufomathiwe, kusuka kudeskithophu yakho, kwi-laptop, nakuma-flash drive asuswayo ngokushesha futhi kalula.
Indlela yokwakha nokususa abasebenzisi abasha beWindows ku Windows 10
Nakhu ukuthi ungawakha kanjani futhi uwaphathe kanjani ama-akhawunti womsebenzisi we-Microsoft, Izindlela zokuwavikela zifaka izinyathelo zokususa / ukususa ngokuphelele ama-akhawunti womsebenzisi ku-Windows 10
Ususe ngomsindo amanye amafayela noma amafolda abalulekile ku-lapotp? Ungakhathazeki nazi izindlela ezahlukahlukene zokubuyisa amafayela asusiwe ku Windows 10, 8.1 no-7!
Lapha Amathuluzi wokuThola Iphasiwedi we-Best we-5 ongawasebenzisa ukusetha kabusha noma ukuguqula iphasiwedi ekhohliwe yekhompuyutha yakho yekhompyutha esebenza Windows 10, 8.1 no-7
Ungaguqula kanjani ama-DVD ku-windows 10 mahhala (Lungisa i-DVD engadlali izinkinga)
Nasi umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wokuguqula amaqoqo amadala ama-DVD abe amafomethi edijithali usebenzisa i-WinX DVD Ripper Platinum mahhala! (lungisa i-DVD engadlali izinkinga)
Ungawathola Kanjani Amafayela Asusiwe kusuka ku-Windows 10, 8.1 no-7?
Uhlangabezana nezinkinga ngokuthola amafayela asusiwe kwi-Windows laptop yakho noma ikhompyutha, thola i-Recoverit Data Recovery isisombululo sakho sokumisa esisodwa ukuthola idatha esusiwe
Ufuna isishintshi se-WPS ukuguqula iMibhalo ye-WPS ibe yi-doc, i-docx noma i-PDF? Lapha usebenzisa i-onlineconvertfree ungaguqulela i-wps ku-doc bese uyilanda ngama-setps amathathu alula
Isipele nokubuyisela isoftware yeWindows 10
Kunezindlela eziningana zokwenza isipele i-PC yakho Lapha sibhale izinhlobo ezahlukahlukene ze-Backup in Windows 10
Izizathu Ezi-5 Zakho IWindows 10 Ikhompyutha isebenza kancane
Ngabe uqaphele Windows 10 Ikhompyutha isebenza ngokunensa? Nazi izizathu ezi-5 zokuthi kungenzeka lokhu kwenzeke nokuthi ungayilungiselela kanjani windows 10 ukuze usebenze kangcono
Ukubuyekezwa kwe-iBeesoft Data Recovery kanye nelayisense yamahhala ebiza u- $ 49.95
I-iBeesoft Data Recovery isoftware ephephile nenamandla yokuthola idatha, isiza ukuthola amafayela wakho asusiwe, afomathiwe noma alahlekile kumakhompyutha, i-HDD yangaphandle, i-SSD, i-USB, imemori khadi, ikhamera yedijithali, njll.
Izivumelwano ze-VPN zibaluleke kakhulu futhi kufanele wazi ngazo. Ukuze kube lula kuwe, sidale leli shidi lokukhohlisa le-VPN.
Izindlela ezi-5 zokufihla indawo okuyo ku-inthanethi (Hlala Ungaziwa)!
Ukufihla indawo okuyo ku-inthanethi kubaluleke kakhulu kunendlela abanye bakho abangacabanga ngayo. Ngakho-ke, ukukusiza ukufihla indawo okuyo ku-inthanethi, nazi izindlela ezinhlanu ezinhle kakhulu zokwenza lokho.
Ukubuyekezwa Komkhiqizo - Ukulungiswa kweStellar for Access
Uyini umshayeli wedivayisi, Kusho ukuthini umphathi wedivayisi nokuthi usebenza kanjani? Lapha umphathi wedivayisi okusho, incazelo nencazelo!
Ungaguquguqula kanjani futhi ucindezele amavidiyo we-4K ku-MP4 kuWindows 10
Nazi izindlela ezimbili zokulondoloza Windows 10 I-OS yokwakha ku Yakha Windows 10 Isici Sesithombe Sesistimu nokusebenzisa insiza yomuntu wesithathu i-CloneGo evumela abasebenzisi ukuthi bahlukanise ukwahlukaniswa kwesistimu yeWindows njengefayela elicindezelwe.
Gcina Ibhizinisi Lakho Liphephile Ngalezi Zeluleko Ezingu-10 Zokuvikela I-Cyber
Lapha siqoqe i-Intanethi elula eyi-10 noma i-Cyber ​​Security Tips 2019 ukwenza ngcono ukuphepha kwenhlangano yakho kwe-cyber Gcina Ibhizinisi Lakho Liphephile kubaduni, abagaxekile nokuningi.
I-PPTP VPN ingenye yezinhlobo ezivame kakhulu nokulula ukuzisebenzisa ze-VPN. Ake sithole ukuthi isebenza kahle kanjani uma iqhathaniswa nezinye.
Izindlela ezi-3 zokusula ngokuphelele i-Hard Drive ku Windows 10 PC
Uma uthengisa noma unikeza unomphela ikhompyutha yakho, Qiniseka ukuthi uvikela imininingwane yakho ebucayi. Lapha sibhale izindlela ezahlukahlukene zokusula ngokuphelele i-Computer Hard Drive yakho